I-Owl Cottage Andresy (Yvelines) - I-Airbnb
I-Owl Cottage Andresy (Yvelines)
Siyakwamukela e-Owl Cottage enkabeni yedolobhana lase-Andrésy!!
I-Owl Cottage itholakala edolobhaneni elihle elibizwa ngokuthi i-Andrésy esifundeni sase-Paris. Umzila wesiteshi sesitimela i-ADRESY J ungaphansi kwemizuzu emihlanu uhamba ngezinyawo ukusuka endlini futhi isitimela siya ngqo enkabeni ye-Paris ukuya esiteshini sesitimela i-St Lazare esiseduze ne-Opéra Garnier! (imizuzu engu-40)
I-Owl Cottage itholakala edolobhaneni elihle lase-France elibizwa ngokuthi i-Andrésy. Isiteshi sesitimela singaphansi kwemizuzu emihlanu yokuhamba ukusuka endlwaneni futhi isitimela siya ngqo enkabeni ye-Paris ukuya esiteshini i-Gare St Lazare esiseduze ne-Opera Garnier!
I-Andrésy yidolobhana elihle elitholakala eMfuleni i-Seine, emaphethelweni amahle aseNtshonalanga enhloko-dolobha yase-France. Leli dolobhana liseduze nezindawo ezidumile ze-chateau endaweni kuhlanganise nezingadi ze-Monet, ikhaya lika-Vincent Van Gogh kanye ne-Chateau de Versailles edumile!
Indlwana yesikhova yifulethi elizimele phezu kwegquma elinekamelo elikhulu elithokomele, elingahlalisa abantu ababili kuya kwabathathu. Kukhona umbhede ophindwe kabili we-cherry oak chalet kanye nombhede ozimele ogoqwayo uma kudingeka. Ikhishi, igumbi lokugezela nendawo yokungena ekhanyayo. Siphinde sibe nobungane nosana nekhotheji uma kudingeka!! Sinendawo evumela ukusebenzisa i-laptop ukuze kube lula ukusebenza ukude nge-wifi ye-inthanethi esheshayo.
Le ndlu ime egqumeni, elibheke ehlathini elidumile lase-Saint-Germain-En-Laye, elibheke isibhakabhaka sase-Paris ngokubukwa kwe-Laliday kanye ne-Eiffel Tower.
Isihlahla sethu esihle se-Lebanese Cedar "Magnificat" sinomlando kule ndlu yakhe, esineminyaka engaphezu kuka-400 ubudala futhi sihlezi maphakathi nengadi yethu enkulu yangaphambili, enokuphakama okungaphezu kwamamitha angu-30! Lena yindlu enkulu enhle etholakala egqumeni elibheke idolobhana lase-Andrésy kanye ne-Seine River enhle. Indlwana imele futhi inawo wonke amasevisi afakiwe.
Zizwe umenyiwe ukujoyina abantu bendawo ezimakethe zethu zabalimi ngoLwesithathu nangoMgqibelo ekuseni ngemikhiqizo evela endaweni. Kusukela ngo-April kuya ku-November kukhona ukugibela isikebhe kwamahhala ukuya esiqhingini sase-Andrésy "Nancy" lapho kunekhefi, uhambo oluhle kanye nehlathi, nendawo yokudlala yezingane ezincane.
Ababungazi bakho base-Australia nabase-France
4.87 · 93 okushiwo abanye
I-Andrésy yidolobhana elihle elitholakala e-Seine, edolobheni elibukekayo lasentshonalanga yenhloko-dolobha yase-France. Leli dolobhana lihamba ngemoto esuka ezikhumbuzweni ezidumile, izingadi zase-Monet, indlu ka-Vincent Van Gough kanye neSigodlo esidumile sase-Versailles!